Abaal Marin La Guddoonsiiyey Ardeydii Ugu Sarreysay Imtixaannada Dugsiyada Sare Ee Puntland (Sawirro) – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xafiiskiisa Garoowe ku qaabilay 13-ka arday ee ugu sarreysay imtaaixaankii dugsiyada sare ee Puntland 2015-2016.
Waxaa ardayda kulankaan ku wehlinayey maamulayaasha Iskuuladdii ay dhiganayeen, waxgarad, iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Puntland.
Madaxweyne Gaas ayaa abaal marin kala duwan siiyey dhammaan 13-ka arday, waxaana abaal marintu isugu jirtay bilado, lacago Kaash ah iyo sidoo kale gaari.
Madaxweynaha Puntland ayaa ardaygii ugu sarreeyey dugsiyada sare ee Puntland guddoon-siiyey abaal marin ah gaari nooca loo yaqaan NOAH ama (NOOHO), waxaana uu Madaxweynuhu tilmaamay in u jeedadu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax-barashada Puntland isla markaana ay ardadu ugu dhiirran lahaayeen in ay tartan u galaan sidii ay guulahaan oo kale u gaari lahaayeen.
C/weli Gaas ayaa uga mahadceliyey ardayda dedaalka ay muujiyeen iyo guusha ay ka gaareen dedaalkoodii ay soo wadeen muddada 12-ka sano ah ee wax baranayeen, sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu u mahadceliyey waalidiintii ardaydaan soo barbaariyey oo garab taagnaa muddadii ay ku guda jireen waxbarashadooda.
Waxgaradka Puntland Iyo Galmudug Oo Billaabay Ka Hadallka Dagaallo Ka Dhacay Mudug
Maamulka degmada Jalalaqsi ee Hiiraan oo ku baaqay in deg deg wax looga qabto xaalado ka jira degmada (Dhageyso)
Rgmwtk jnidye cialis from canada cialis from india
Viagra Sans Ordonnances Quebec Zikepe [url=https://ascialis....